प्रधानमन्त्रीलाई खास के भएको हो ? |
प्रधानमन्त्रीलाई खास के भएको हो ?
१५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०३:२८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको रगतमा पानीको मात्रा बढी भयो, शरीर सुन्नियो र ज्वरो आयो । त्यसैले उनलाई बुधबार बिहान ९ बजे ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना गरियो । तर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर र प्रधानमन्त्री स्वयंका निजी चिकित्सकले हस्ताक्षर गरेर भने, ‘प्रधानमन्त्री नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउनुभएको हो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य छ ।’ तर, विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीको रगतबाट पानी फाल्न ‘अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन’ गरिसकिएको थियो । बिहीबार पनि उनको हेमोडायलाइसिस गरिएको छ । यो सामान्य र नियमित प्रक्रिया होइन । तर, अस्पताल र निजी चिकित्सकले पेसागत आचारसंहिताविपरीत प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सूचनालाई खेलबाड बनाइरहेका छन् ।
अस्पतालले करिब १० घन्टापछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे विज्ञप्ति निकाल्यो । साँझ ७ बजेपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि सही सूचना भने दिइएन । सरकार र उनको सचिवालयले त साँझसम्म पनि प्रधानमन्त्री नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मात्रै अस्पताल गएको र सामान्य अवस्थामा रहेको सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको रगतमा पानीको मात्रा अत्यधिक देखिएपछि बुधबार दिउँसै ‘अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन’ गरिएको थियो । शरीरमा भएको विकार बाहिर निकाल्ने प्रक्रियाअन्तर्गत हेमोडायलाइसिस अर्थात् डायलाइसिस गरिन्छ । यो भनेको शरीरको विकार छान्ने प्रक्रिया नै हो । तर, रगतमा विकारको मात्रा अत्यधिक भएमा र तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने भएमा ‘अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन’ प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
अस्पतालले साँझ निकालेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीको यो उपचारबारे लुकाइयो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको र बुधबार राति नै या बिहीबार बिहानसम्म डिस्चार्ज गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट पनि सोही व्यहोराको सूचना सम्प्रेषण गरियो । तर, बिहीबार प्रधानमन्त्रीको हेमोडायलाइसिससमेत गरियो । साँझ मात्रै डिस्चार्ज भएर प्रधानमन्त्री निवास फर्किए ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता ईश्वर पोखरेल बुधबार र बिहीबार दुईपटक अस्पताल पुगे । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्वास्थ्यबारे औपचारिक जानकारी लिए । तैपनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे जनतालाई जानकारी गराउन उनले उचित ठानेनन्, मौन बसे । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले भने बिहीबार अस्पताल पुगे पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पाएनन् ।
दिउँसो ३ बजे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अस्पताल पुगेका थिए । उनले झन्डै एक घन्टा अस्पतालमा बिताए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य राम्रो भएको भन्दै उनि बाहिरिएका थिए । मिडियाको दबावका बीच अस्पतालले साँझ ५ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारीक जानकारी दिएको हो । औपचारीक जानकारी दिए पनि अस्पतालले नियमति डायलाइसिस गर्ने या नगर्ने बारे निर्णय दिन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीवार राति ८ बजे डिस्चार्ज गरिएको छ ।
दुई प्रकारको हुन्छ डायलाइसिस
मिर्गौला फेल भएका व्यक्तिका लागि दुई विकल्प हुन्छ, डायलाइसिस गर्ने वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले पनि दुई विकल्प देखाएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । अहिले लायलाइसिसलाई नै चिकित्सकले प्राथमिकतामा राखेका छन् । मिर्गौलाले रगत सफा गर्न नसक्ने भएपछि मेसिनको सहायताले रगतमा भएका फोहोर तत्व, शरीरलाई चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा रहेको नुन र पानी बाहिर फालेर रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न गरिने प्रक्रिया डायलायसिस हो । यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ ।
पहिलो, हेमोडायलाइसिस । हेमोडायलाइसिस गर्दा रगतलाई नलीको माध्यमबाट मेसिनमा पठाइन्छ र शुद्धीकरण गरेर पुनः नलीकै माध्यमबाट शरीरमा फिर्ता गरिन्छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको हेमोडायलाइसिस गरिएको ग्रान्डी अस्पतालले जनाएको छ ।
दोस्रो, पेरिटोनियल डायलाइसिस । यस प्रकारको डायलाइसिस गर्दा बिरामीको पेटभित्र ग्लुकोज मिसाइएको (पिडी सोलुसन) दुई लिटर पानी पाइपको माध्यमबाट पठाइन्छ । यो पानी चार घन्टासम्म राखेर निकालिन्छ । यो प्रक्रिया एक दिनमा तीनपटकसम्म गर्नुपर्छ ।
अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन र हेमोडायलाइसिसमा फरक
अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन र हेमोडायलाइसिस फरक विधि हो । अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन रगतमा भएको पानी निकाल्ने विधि हो । हेमोडायलाइीसस भने पानी र अन्य खराब तत्व पनि निकाल्ने विधि हो । डायलाइसिसमा हेमोडायलाइसिस र अल्ट्रा–फिल्ट्रेसन दुवै गर्न सकिन्छ । त्यसैले सामान्य बुझाइका लागि अल्ट्रा–फिल्ट्रेसनलाई डायलाइसिस पनि भन्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको अल्ट्रा–फिल्ट्रेसनमार्फत रगतमा भएको पानी निकालिएको थियो ।
सिंगापुरमा गरेको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ले काम गरेन
१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाले क्रमशः काम गर्न छाडेपछि गत साउन र भदौमा सिंगापुरमा उपचार गराएका थिए । १८ साउनमा सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गरेर २७ साउनमा फर्किएका थिए । त्यसको १० दिनपछि ५ भदौमा उनी फेरि सिंगापुर गएर ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ गरी स्वदेश फर्केका थिए । शरीरबाट ‘एन्टिबडिज’ हटाउन प्रधानमन्त्रीको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ गरिएको थियो । यो प्रक्रियामा रगतबाट एन्टिबडिज निकालिन्छ अथवा एन्टिबडिज बढ्न नदिने औषधि प्रयोग गरिन्छ ।
मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ समस्याको समाधान होइन । यसले केही समय मात्रै काम गर्ने हो, त्यसपछि पुरानै अवस्था निम्तिन्छ अर्थात् मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आउन थाल्छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही भएको हो । अब प्रधानमन्त्रीले मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने वा नियमित डायलाइसिसमा जनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर, ग्रान्डीका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पाण्डेले भने सिंगापुरमा गरिएको ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ले काम गरे/नगरेकोबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।